Dowlada Soomaaliya oo u muuqata mid iska indha tireysa masuuliyada ka saran shacabka Soomaaliyeed (War-bixin). |
Dowlada Soomaaliya oo u muuqata mid iska indha tireysa masuuliyada ka saran shacabka Soomaaliyeed (War-bixin).
Iyada oo ay dowlad waliba oo aduunyada ka jirta ay si heerkeedu sareeyo looga doonayo ilaalinta shacbigeeda, ayaa dowlada Soomaaliya waxa ay u muuqataa mid arintaasi hareer mareysa marka laga eego dhinacyo ay kamid yihiin qasaaraha shacabka soo gaara oo aysan waxba u arag.
Dowlada Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amaanka ayaa waxaa caada u ah in marka uu dhaco qarax lagu hoobto oo uusan qasaare kasoo gaarin masuul dowlada ka tirsan ama ajaabib in ay ku tilmaamaam qarax fashilmay oo aan bar-tilmaameedkiisii gaarin.
Hadadalada nuucaas oo kale ah ayaa waxaa laga dheehan karaa in dowladu ay ka naxeyso oo kali ah masuuliyiinta dowlada iyo ajaanibta dalka ku sugan ee aysan 10-ka milyan ee shacabka ah wax xanuuna ku heyn.
Qarax xoogan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka hadlay xoghayaha maamulka gobalka Banaadir, Cabdi Kaafi Hilowle Daa’uud iyo afhayeenka ciidankda Police-ka Soomaaliyeed, Jen. Maxamed Yuusuf Madaale iyaga oo midkoodna muujin in shacabku ay yihiin kuwa kaliya ee ilaalinta u baahan la’aantoodna uusan qarankuba jireyn.
Xoghayaha maamulka gobalka Banaadir, Cabdi Kaafi Hilowle Daa’uud, ayaa yiri, “Waa fashilmay Qaraxaasi. Waxaa wax ku noqday qoladii fulisay iyo shacab oo kali ah”.
Afhayeenka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Jen. Maxamed Yuusuf Madaale ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid fashilmay, ayna ku dhamadeen oo kaliya dad shacab ah.
Dhamaan hadaladaani waxa ay hareer marsanyihiin shuruucda u taalla dowladnimada, maadaama dowladuba ay hacabka dowlad ku tahay ee deegan faaruq ah ninna uusan dooneyn in uu maamulo.
Hadii aan taariikhda dib ugu laabanno waxaa dhacda aduunyada in shaqsi ama shaqsiyaad afduub loo heesto xoog ay ku furtaan ciidamada gaarka ah ee dalka ay u dhasheen mawaadiniinta gacanta ugu jira gaangistarada iyada oo tusaale loo soo qaadan karo Kabtankii markabkii Alabaama ee dalka Mareykana ee bur-cad badeeda Soomaaliyeed xoogga looga furtay arintaas oo muujineysa sida ay muhiim ugu tahay dowladaha dunida bad-badaadinta mawaadiniintooda.
Hadaba, Su’aasha is-weydiinta mudan waxa ay tahay mashacabkeenna ayaa shacabka kale ee dunida ka liita misa dowladeena ayaa hadalada diblamaasiyadeed ee war-baahinta ay ka sheegaan ay yihiin kuwa hareer marsan hab-dhaqankii laga doonayay hogaanka umada?
Waxaa qoray warbixintaani shabakad somalinimo1.com